Tovolahy maty tao amin’ny « violon » : « Ny fokonolona no namono azy », hoy ny lehiben’ny polisy
« Isan’ireo mpikambana amin’ny tambajotran-jiolahy « bandes des 12 » io tovolahy io. Ny fokonolona teny Itaosy nisambotra azy no namono azy, ka ny polisy no tonga nanavotra azy.
Nanaiky izany izy tamin’ny famotorana ary misy soniany mihitsy izany. Isan’ireo nanafika ny Jirama teny Itaosy izy ; nanafika ny Filoha Tale jeneralin’ny Media Consulting ary isan’ireo mpanao fanafihana eny Ambavahaditokana », hoy ny jeneraly Rakotondratsima Jhonson, Tale jeneralin’ny polisim-pirenena.
Ny zava-nitranga teny amin’ny fokontany Akany Sambatra Itaosy ny marainan’ny alatsinainy, dia nisy nanondro an’i Andrinirina Tokiniaina, ilay tovolahy maty, nilaza ho isan’ireo namaky trano teny an-toerana. « Maka rivotra isa-maraina teny no nataony satria tsy salama izy fa voan’ny « asthme », hoy ireo fianakaviany.
« Nampilazana ny polisy dia tonga nanavotra azy. Efa novonoin’ny olona izy tamin’izay. Ny polisy aza mbola nitondra azy notsaboina tao amin’ny hopitalin’Itaosy. Taorian’io vao nentina niverina tany amin’ny birao izy natao famotorana », hoy kosa Rakotomihantarizaka Organes, minisitry ny filaminana anatiny.
Tsy navela nosoloina akanjo
« Nahagaga anay raha toa ka izany no zava-nitranga, nefa izahay tsy navela hihaona tamin’i Andry mihitsy. Nitondra akanjo ho azy izahay hisoloany kanefa tsy navela fa hoe mifatotra izy ka tsy afaka misolo akanjo. Izay no voalazan’ny polisy dia mino izahay fa tsy maintsy mbola hipoitra ny marina », hoy ihany ireo fianakaviana.
Nilaza ny tompon’andraikitry ny polisy fa « misy ny famotorana mikasika ity raharaha ity ary nanonona anaran’ireo mpikambana ao amin’ny « bandes des 12 » i Andry tamin’ny famotorana azy. Efa mahalala ny zava-nisy ny tonian’ny Fampanoavana ary nanome baiko anay ny hanohizana ny famotorana ».
19 taona i Andry izao maty izao ary taona faharoa ao amin’ny sekoly ambony GSI etsy Tsaralalàna, manaraka ny lalam-piofanana fitantanana sy informatika.